Shiinaha fulinta adeegga ECommerce iyo wakiilka | Sunson
Waa maxay adeegyada fulintu?
Adeeg fulin waa bakhaar dhinac saddexaad ah oo kuu diyaariya kuna amraya amarradaada adiga. Waxay tan ku sameysaa xaruntiisa fulinteeda. Adeegyada dhammaystirka Ecommerce waxay ku habboon yihiin ganacsiyada aan rabin inay wax ka qabtaan maraakiibta ama ay ka korodheen awoodda bakhaarrada jira illaa heer aysan awoodin inay markab amarro naftooda mar dambe sii maraan.
1.Sunson API waxay kuu sahleysaa inaad dhexgaliso websaydhkaaga isla markaana aad iswaafajiso xogta.
Ka qayb qaadashada nidaamkayaga si aan uga caawino hagaajinta iyo fududeynta dhammaystirkaaga.
3.WMS (Nidaamka Maareynta Bakhaarka) waxaa loo sameeyay la socodka waqtiga-dhabta ah iyo waxtarka sare.
Fulinta eCommerce Global
Iskuduwaha xuduudaha ee eCommerce wuxuu awood u siinayaa macaamiil badan oo caalami ah inay helaan dukaamadaada oo ay iibsadaan alaabo. Shaqadaada ugu muhiimsan waa inaad maal gashato suuqgeynta si aad u ballaariso ganacsigaaga eCommerce. Shaqadeenu waa inaan yareyno culeyska fulinta, adiga oo buuxinno una rarno alaabtaada macmiilkaaga albaabkiisa.
Xalka dhammaystirka dhammaystirka ee loogu talagalay eCommerce
Dhammaan adeegyada fulinta eCommerce ee aad u baahan tahay, sida keydinta, soo qaadista, xirashada, iyo rarka, waxaa lagu sameyn karaa Sunsonexpress. Kadib sanado badan oo iswaafajin ah, waxaan fududeeynay oo aan qaabeynay hananka fulinta. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fuliso hawlgallo fudud, iyo nidaamkayaga fulineed otomatigga ah ayaa qaban doona inta soo hartay.
Xalka dhammaystirka Ecommerce waxaa ka mid ah:
Kaydinta bilaashka ah 90 maalmood
Xakamaynta iyo xirxirashada kartoo
Xeerar u deji rarka otomaatigga ah
La soco kharashka waqtiga-dhabta ah oo maamul biilasha
macluumaadka raadraaca waxaa si otomaatig ah loogu diri doonaa iibsadayaasha
Si Fudud Isku Xidh Bakhaaradaada Internetka
Ku xirnaanta dukaamadaada internetka Sunsonexpress waxay u oggolaaneysaa amarrada si otomaatig ah in loogu dhejiyo nidaamkeenna waana buuxin doonnaa oo waxaan ka rari doonnaa bakhaarkayaga Shiinaha ee macaamiishaada caalamiga ah. Lambarada raadraaca waxaa loo cusbooneysiin doonaa dukaamada markaan calaamadeyno amarrada sida loo fuliyay.
Waxaan si toos ah ula midoobi karnaa inta badan dukaamada dukaamada eCommerce mana laha xad xadidan tirada dukaamada aad ku xidhi karto hal xisaab fulin ah.
Lagu sameeyay Shiinaha? Ka dib ku keydi Shiinaha iyo Markab Ka Iman Doona Shiinaha!
Adeeg fulin amarka Sunsonexpress eCommerce wuxuu ku habboon yahay ganacsatada khadka tooska ah ka ganacsada ee wax soo saarkooda ka keena Shiinaha ama ku iibinaya wax soo saarka Shiinaha.
Bakhaarkayagu wuxuu ku yaal Shenzhen, Shiinaha, oo u dhow soosaarayaashaada. Tani waxay ka dhigan tahay in kaydinta iyo dhammaystirka qarashyadu ay aad u hooseeyaan isla markaana waqtiga wax loo qaybiyo uu ka gaaban yahay.
Intaas oo kaliya maahan, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo qiimo-kordhin ah si aan u calaamadeynno ama aan u hagaajino tayada adeegga fulinteeda, sida: ka-soo-qaadashada warshad, si buuxda u summadaysan iyo xirmooyin xirmo.
Adeegyo Saadka eCommerce badan
Xalkayaga saadka ayaa daboolaya 200 + waddan iyo gobollada adduunka oo dhan iyada oo loo marayo adeegyada boostada, khadadka gaarka ah, iyo soo dejinta. Laga soo bilaabo fulinta eCommerce ilaa gaarsiinta badeecada, waxaa naga go'an inaan kuu fududeyno maraakiibta caalamiga ah. Arimaha isku dhafan ee gaadiidka iyo kastamyada anaga ayaa kahadleyna. Adeegyadeena DDP iyo DDU sidoo kale waa inay lahaadaan ganacsiyada eCommerce badankood.
Waxqabadka Ecommerce Shiinaha
Adeegga dhammaystirka Ecommerce
Bakhaarka dhammaystirka Ecommerce
Fulinta Amarka Ecommerce
Nidaamka Fulinta Amarka Ecommerce
Buuxinta Ecommerce Ecommerce